Maxey Amisom xilka uga qaaday Col. Cali Aadam Xumud? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: War xalay kasoo baxay AMISOM ayaa si kedis ah loogu sheegay in Afhayeenka ciidankaas ee kasoo jeeda Jamhuuriydda Jabuuti uusan hadda kadib ku hadli karin magaca AMISOM.
AMISOM ma faahfaahin sababta xil ka qaadista, laakiin waxey ku gaabsadeen inuu baahiyey warar aan kasoo bixin AMISOM, hase ahaatee waxaa arrintaas loo aaneeyey war uu shalay siiyey warbaahinta oo uu ku sheegay in ciidamada Nabadsugidda Soomaaliya ay wax ka yar 2 saac kusoo afjareen koox ka tirsan Alshabaab oo gelinkii dambe ee Khamiista qabsaday qeyb ka mid ah xerada AMISOM ee Xalane, kuna jiraay ilaa shalay subax Jimcihii.
Waxaa kale oo ay AMISOM ka xanaaqday in Col. Xumud uu sheegay inuu jiro shaki la xiriira iney jirto cid fududeysay weerarka, isagoo is weydiiyey sida ay ku dhici karto in ciidamada AMISOM oo ay la shaqeynayaan askar Soomaali ah oo dhul taqaana looga soo gudbo.
Ragga ka tirsan Alshabaab ayaa xerada AMISOM oo aad loo ilaaliyo jiiray khamiistii wax yar kadib sideed saac maalmeed ee xilliga Soomaaliya, waxeyna halkaas ka dagaalamayeen ilaa subiix dambe ee Jimcaha iyo habeenkii oo dhan halkaas ku jiray.
Shalay subax Jimcihii waxaa halkaas la geeyey cutub ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya ee loo yaqaano Gaashaan, waxeyna dagaalka kusoo afjareen wax ka yar labo saac.
Ciidamada Nabadsugadda ayaa soo bandhigay meydadka qaar ka mid ah ragii Alshabaabka ahaa ee xarruntaas weeraray, sidoo kale waxey soo bandhigeen dad nool oo ay sheegeen iney ka shakiyeen iney weerarka ku lug lahaayeen.
Xilligaas kadib, Col. Xumud ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Soomaaliya ee Gaashaan muddo kooban dagaalka kusoo afjareen, arrintaas ayaana la sheegay iney ka acaroodeen saraakiisha AMISOM ee kasoo jeeda Uganda.
Dhanka kale, Col. Cali Aadan Xumad ayaa gaashaanka ku dhiftay xilka laga qaaday, isagoo sheegay in aanu waxba kala socon wararka sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyay.
“Aniga war uma haayo xilka la oga qaaday, waana sii wadanayaa howsheena, xilka waxaa ii dhiibay Midowga Afrika iyaga ayaana iga qaadi kara” ayuu yiri Col. Cali Aadan Xumad oo la hadlay Warbaahinta.
Col. Cali Aadan Xumad oo ah Sarkaal Jabuutiyaan ah oo qeyb ka ah howl galka AMISOM ayaa xilka Afhayeenimo loo dhiibay bishii July ee sanadkii 2012, waana nin afka soomaaliga wareysiyada ku siiya warbaahinta Soomaaliya.
Lama oga in go’aanka AMISOM ka soo baxay ay la ogtahay Ururka Midowga Afrika oo ay hoos-tagaan Ciidamada ku sugan Soomaaliya ee ku howl gallaya dallada AMISOM.